Fanadinana bakalorea: betsaka ireo ankizivavy bevohoka | NewsMada
Fanadinana bakalorea: betsaka ireo ankizivavy bevohoka
Voalazan’ireo mpampianatra mampanao fanadinana fanatanjahantena bakalorea etsy Mahamasina fa maromaro ireo tovovavy voatery najanona, tsy afaka hiatrika ny adina fanatanjahantena satria mitondra vohoka.
Tsy mahazo mandray anjara amin’ny adina izy ireo rehefa voamarin’ny dokotera eny amin’ny toerana hanaovana fanadinana fa bevohoka. Tsy maintsy miandry ny adina an-tsoratra na am-bava izy ireo.
Marihina fa manodidina ny 16 ka hatramin’ny 19 taona ireo tovovavy hanala fanadinana bakalorea bevohoka ireo. “Mety hiteraka fahafahan-jaza na mitarika amin’ny fahafatesana mihitsy ny fanaovana fampiasam-batana be rehefa mitondra vohoka ny vehivavy ka tsy maintsy noraisina ny fepetra ho azy ireo”, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray teny Mahamasina.
Marihina fa misy amin’izy ireo tsy fantatry ny ray aman-dreniny akory hoe mitondra vohoka. Ny sasany kosa, efa manambady mihitsy, saingy tsy nahafantatra fa efa bevohoka ka saika mbola hiatrika adina fanatanjahantena ihany.